Golaha Shacabka Oo Mar Kale Ka Dooday Xeer-Hoosaadkooda – Kalfadhi
Xeer-hoosaadka Golaha Shacabka ayaa mar kale maanta looga dooday kulankii 20-aad ee kalfadhiga afaraad ee Golaha Shacabka.
Mahad Cabdalla Cawad ayaa kulanka oo ay goobjoog ahaayeen 141 xildhibaan shir guddoominaayay.
Qodobbada ay xildhibaannada ka doodeen ayaa waxaa ka mid ahaa ilaalada madaxda imaaneysa xarunta Golaha Shacabka iyo hubka ay wataan, sidoo kale qodob ka hadlaayay waqtiga ay qaadaneyso saxiixa madaxweynaha ee la xiriira hindise sharciyeedyada loo gudbiyo iyo waqtiga xukuumadda ku soo gudbin karto hindise sharciyeed.
Xildhibaanada ayaa soo bandhigay talooyin iyo fikrado la xiriira qodobada ku jira xeer hoosaadka Golaha Shacabka.
Guddoomiye Mahad ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in si wadajir ah oo masuuliyad leh looga doodo wax ka baddalka xeer-hoosaadka golaha lagu sameynayo.
Ugu dambeyn Mahad Cabdalla Cawad oo kulanka soo xeray ayaa sheegay in dooda xildhibaannada ay sii socon doonto.